'Isiko' - I-Riverside Retreat - I-Airbnb
'Isiko' - I-Riverside Retreat
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguShyam
Yiya kwiinduli ezintle zasePonmudi, indawo yokuphola enobubele kwindalo, enokuba yindawo entle yezibini, intsapho okanye amagcisa kwindawo ehlala abantu.
Uphahla olude kunye neendonga zendalo ziguqulela ingokuhlwa emangalisayo, ukuhonjiswa okumuncis 'iintupha kwenza kube mnandi ngokwemvelo. Indawo yokoja esecaleni komlambo, iindawo zeti, ukulinganisela i-pebble, ukujoga kusasa ngakwibhulorho yentsimbi ngaphaya komlambo ukuya kwihlathi eliluhlaza kunye neendawo ezibonisa ubuhlanga. Ngenye imini akwanelanga kumntu obuka iindawo; oko kukuthi, ukuba uye wakwazi ukuphuma kumlambo otsibilikayo.
4.75 · Izimvo eziyi-130
Isondele kakhulu kwindlela ephambili eya kwi-Ponmudi kodwa soze uzive usondele xa ungaphakathi kwendawo. Isandi somjelo sikusa kwelinye ihlabathi ngemizuzwana, nangona ukufutshane nendlela, iivenkile okanye ivenkile yokutyela onokuya kuyo ngeenyawo
Ukutya akufumaneki kule ndawo yokuhlala. Kukho ubuncinane bezinto zokupheka njengefriji, i-microwave oven kunye nendawo yokoja enokusetyenziswa ziindwendwe. Ukuba kuyimfuneko, umntu okhathalelayo uRajesh unokuza nokutya kwiivenkile zokutyela ezikufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Shyam
Kusenokwenzeka andifumaneki kwindawo kodwa kukho umntu okuhoyayo oza kukubhalisa xa ufika aze enze izinto ezifunekayo ukuze uhlale kamnandi. Ndiza kufumaneka ngefowuni/ nge-imeyile ukuba kuyimfuneko ukuba uqhagamshelane nathi.